Amụma nzuzo - Quotes Pedia
Bọchị dị irè: June 29, 2019
Adreesị weebụsaịtị anyị bụ https://www.quotespedia.org.
Quatespedia (“anyị”, “anyị”, ma ọ bụ “anyị”) na-arụ ọrụ webụsaịtị https://www.quotespedia.org (ọrụ ahụ).
Peeji a na-agwa gị iwu anyị gbasara mkpokọta, ojiji, na ngosipụta nke data mgbe ị gara na / ma ọ bụ jiri weebụsaịtị na / ma ọ bụ ọrụ na nhọrọ ndị ị jikọtara data ahụ.
Anyị na-eji data a iji nye ma melite ọrụ ahụ. Site na iji weebụsaịtị, ị kwenyere na nnakọta na ojiji nke ozi dị ka iwu a si dị. Ọ gwụla ma akọwapụtara ya na Nzuzo Nzuzo a, okwu ndị a na-eji na Nzuzo Nzuzo a nwere otu ihe dị na Usoro anyị na Ọnọdụ anyị, enwetara site na https://www.quotespedia.org
Nchịkọta Ozi na Jiri
Anyị na-anakọta ọtụtụ ozi dị iche iche maka nzube dị iche iche iji nye ma melite ọrụ gị.
Ụdị Data Anakọtara
Anyị nwere ike ịnakọta ozi niile gbasara otu esi abanye saịtị ahụ ma jiri ya ("Data iji"). Data Usage a nwere ike ịgụnye ozi dị ka adreesị Protocol Internet nke kọmputa gị (dịka adreesị IP), ụdị ihe nchọgharị, ụdị ihe nchọgharị, ibe nke weebụsaịtị anyị ị gara, oge na ụbọchị ị gara, oge ị na-etinye na ibe ndị ahụ. ihe eji achọta ngwaọrụ na data nyocha ọzọ.
Ndepụta na Data Kuki
Anyị na-eji kuki na teknụzụ ọchụchọ ndị yiri ya iji soro ọrụ na weebụsaịtị anyị ma jide ụfọdụ ozi.
Kuki bụ faịlụ nwere obere data nke nwere ike ịgụnye njirimara amaghi ama. Na ebe nrụọrụ weebụ zigara ihe nchọgharị kuki gị wee chekwaa na akụrụngwa gị. Teknụzụ ntanetị ejirila mgbama, mkpado, na edemede iji nakọta ma soro ozi na iji melite ma nyochaa weebụsaịtị anyị.
Can nwere ike ịkụziri ihe nchọgharị gị iji jụ kuki niile ma ọ bụ gosi mgbe ezigara kuki. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnabataghị kuki, ị gaghị enwe ike iji ụfọdụ akụkụ nke weebụsaịtị anyị.
Ihe Nlereanya Kuki anyị na-eji:
Oge Kuki. Anyị na-eji Oge Cookies iji rụọ ọrụ na weebụsaịtị anyị.
Kuki mmasị. Anyị na-eji kuki mmasị iji cheta mmasị gị na ntọala dị iche iche.
Kuki nchekwa. Anyị na-eji kuki Nchebe maka ebumnuche nchekwa.
Quotespedia.org na-eji data anakọtara maka ebumnuche dịgasị iche:
Iji nye ma lekọta weebụsaịtị
Iji nye nyocha ma ọ bụ ozi bara uru ka anyị wee nwee ike melite weebụsaịtị
Iji nyochaa ojiji nke weebụsaịtị
Iji chọpụta, gbochie ma kwupụta nsogbu ndị ọkachamara
Kuki bụ obere faịlụ nke na-arịọ ikike ka etinye ya na draịvụ kọmputa gị. Ozugbo ikwenye, agbakwunye faịlụ ahụ na kuki ahụ na-enyere aka nyochaa okporo ụzọ weebụ ma ọ bụ na-eme ka ị mara mgbe ị gara n'otu saịtị. Kuki na-ahapụ ngwa weebụ ịzaghachi gị dịka nke gị. Ngwa weebụ nwere ike ịkpa arụmọrụ ya na mkpa gị, ihe na-amasịghị ya na site na ịnakọta na icheta ozi gbasara mmasị gị. Anyị na-eji kuki okporo ụzọ iji chọpụta peeji ndị a na-eji. Nke a na - enyere anyị aka nyochaa data gbasara okporo ụzọ ibe weebụ ma melite weebụsaịtị anyị iji mee ka ọ dị mkpa maka ndị ọbịa. Anyị na-eji ozi a maka ebumnuche nyocha nke mgbakọ na wee wepụrụ data ahụ na sistemụ. N'ozuzu, kuki na-enyere anyị aka ịnye gị weebụsaịtị kachasị mma, site na-enyere anyị aka nyochaa peeji ndị ị bara uru na nke na-adịghị gị. A kuki n'ụzọ ọ bụla anaghị enye anyị ohere ịbanye na kọmputa gị ma ọ bụ ozi ọ bụla gbasara gị. Can nwere ike ịhọrọ ịnabata ma ọ bụ iju kuki. Imirikiti ihe nchọgharị weebụ na-anakwere kuki, mana ị nwere ike gbanwee gbanwee ihe nchọgharị gị ka ị jụ kuki ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Nke a nwere ike igbochi gị iwere ohere zuru oke nke weebụsaịtị.
Ọzọkwa, Quotespedia na-eji kuki iji gosipụta mgbasa ozi anyị na gị na weebụsaịtị dị iche iche na Internetntanetị.
May nwere ike ịpụ na ojiji nke Google site na iji kuki site na ịga na Google Ntọala Mgbasa ozi.
Ndị na-ere ahịa nke atọ
Ndị na-ere ahịa ndị ọzọ, gụnyere Google, na-eji kuki iji na-enye mgbasa ozi dabere na nleta saịtị weebụ gị gara aga.
Ojiji nke DoubleClick kuki na-enyere ya na ndị mmekọ ya aka inye gị mgbasa ozi dabere na nleta gị na Quotespedia Blog na / ma ọ bụ saịtị ndị ọzọ na Internetntanetị.
You nwere ike ịpụ na ojiji nke kuki DoubleClick maka mgbasa ozi dabere na mmasị site na ịga Ntọala Mgbasa ozi. (ma ọ bụ site na ịga banyere.)
Ndị ọzọ nwere ike iji kuki, mgbama weebụ, na teknụzụ ndị yiri ya iji nakọta ma ọ bụ nata ozi site na nleta weebụ gị na ebe ọzọ na ịntanetị ma jiri ozi ahụ iji nye ọrụ nha na mgbasa ozi ezubere iche.
Anyị nwere ike iji ndị na-eweta ọrụ ndị ọzọ iji nyocha ma nyochaa ojiji nke ọrụ anyị.
Iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere omume nzuzo nke Google, biko gaa na Nzuzo Google & Okwu weebụ: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Mgbanwe na Nzuzo Nzuzo a
Anyị nwere ike imelite Iwu Nzuzo anyị site n'oge ruo n'oge. A na-adụ gị ka ị na-atụle Iwu Nzuzo a kwa oge maka mgbanwe ọ bụla. Mgbanwe na Iwu Nzuzo a dị irè mgbe edepụtara ha na ibe a.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara Nzuzo Nzuzo a, biko kpọtụrụ anyị:
Site na email: [Email na-echebe]
Anyị na-eji kuki iji hụ na anyị na-enye gị ihe kasị mma ahụmahụ na anyị website. Ọ bụrụ na ị nọgide na-eji saịtị a, anyị ga-ewere ya na ị na-enwe obi ụtọ na ya.Ok